राजनीति – Page4– सप्तरंगी एफ एम
नेपाल महिला संघद्वारा महिला हिंसा बिरुद्धको कार्यक्रम सम्पन्न
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/मंशिर १५/ माहिला हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान अन्तर्गत नेपाल महिला संघ झाप क्षेत्रीय समितिले अन्तक्र्रिया कर्याक्रम सम्पन्न गरेको छ । संघिय संसद सदस्य महेन्द्रा कुमारी लिम्बुको प्रमुख आतिथ्यतामा नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय समितीको कार्यालय दमकमा आज भएको कार्यक्रमका वक्ताहरुले महिला हिंसा अन्त्य गर्न महिला संगै पुरुषको पनि साथ रहनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । महिला संघ दमक नगर ...
गौरादहमा उप प्रमुखको अध्यक्षतामा बैठक बसेको भन्ने कुरा गलत भएको नगर प्रमुख द्वारा स्पष्ट
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/मंशिर १४/ झापाको गौरादह नगरपालीकामा उप प्रमुखको अध्यक्षतामा बैठक बसेर बिभिन्न निर्णयहरु भएको भन्ने कुरा गलत भएको नगर प्रमुख रोहित कुमार शाहले बताउनु भएको छ । नगरका बिभिन्न ऐन र नियम बनाउने बिषयमा सहमती नजुटेको तर उप प्रमुखको अध्यक्षतामा बैठक भने नबसेको नगर प्रमुख शाहले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउनु भएको छ । आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन ...
सरकारको कामको बारेमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ : नारायणकाजी श्रेष्ठ
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/मंशिर १४/ नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारको कामको बारेमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । परिणाममुखी काम गर्न आवश्यक भएको भन्दै उहाँले आत्मसमीक्षा जरुरी भएको स्पष्ट पार्नु भएको छ । तर, अहिले नै सरकारको नै मूल्याङकन गर्ने बेला भने भइनसकेको उहाँको भनाइछ । विराटनगर विमानस्थलमा आज स्थानीय सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा नेता श्रेष्ठले भन्नु भयो, ‘सरकारको कामको मूल्याङन गर्ने ...